सुनचांदीको भाउ आज पनि यति धेरैले घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो मूल्य…… – SUDUR MEDIA
March 30, 2021 AdminLeaveaComment on सुनचांदीको भाउ आज पनि यति धेरैले घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो मूल्य……
आज मंगलबार पनि सुनको भाउ ओरालो लागेको छ । चैत १७ गते सुन तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन छापावाला सुन ८६ हजार रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला ८५ हजार ५५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अघिल्लो कारोबार दिन भने सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ८६ हजार ५०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो ।
मंगलबार चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य गिरावट भएको छ । यस दिन चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला एक हजार २१५ रुपैयाँमा किनबेच हुँदैछ । सोमबार पनि चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार २२५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्: सुदूरपश्चिमः दुई लाखभन्दा बढीलाई कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइयो ! बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म दुई लाखभन्दा बढी व्यक्तिले कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गत माघदेखि हालसम्म कूल दुई लाख दुई हजार ८०८ जनालाई खोप दिइएको जनाएको छ ।